Imibuzo evame ukubuzwa - Guangzhou Hongwu Material Technology Co., Ltd.
UHONGWU NANO ungumkhiqizi waseChina wama-nanoparticles ahlukahlukene angaphili. Ukugxila kwethu okuyinhloko kuyi-nanometer scale powder nezinhlayiya. Sifaka amasayizi amaningi ezinhlayiya ze-10nm kuya ku-10um, futhi singakha nosayizi abengeziwe ngokufunwa. Imikhiqizo yethu ihlukaniswe ngamakhulu ezinhlobonhlobo zezinhlobonhlobo: i-elemental, i-alloy, i-compound ne-oxide, uchungechunge lwe-carbon, nama-nanowires.
Kuya ngesampula ye-nanopowder oyifunayo. Uma isampula lisesitokweni ngephakeji elincane, ungathola isampula yamahhala ngokumane ukhokhele izindleko zokuthumela, ngaphandle kwama-nanopowders ayigugu, uzodinga ukumboza izindleko zesampula nezindleko zokuthumela.
Ngingathola imininingwane yemibhalo?
Yebo, i-COA, i-SEM, i-TEM iyatholakala.
Ngingasithola kanjani isicaphuni?
Sizokunikeza isilinganiso sakho sokuncintisana ngemuva kokuthola imininingwane ye-nanopowder enjengosayizi wezinhlayiyana, ubumsulwa; imininingwane yokusabalalisa efana nesilinganiso, isisombululo, usayizi wezinhlayiyana, ubumsulwa.
Ngingayikhokha kanjani i-oda lami?
Izindlela zokukhokha esizemukelayo: I-Paypal, iWestern Union, ukudluliswa kweBhange, uL / ​​C.
Ungasiza nge-nanopowder eyenziwe ngokwezifiso?
Yebo, singakusiza nge-nanopowder eyenzelwe wena, kepha sizodinga i-minmum oda quantiy nesikhathi esiholayo cishe amasonto ayi-1-2.
Ungaqinisekisa kanjani ikhwalithi yakho?
Sinohlelo lokulawulwa kwekhwalithi oluqinile kanye neqembu elizinikele locwaningo, besigxile kuma-nanopowders kusukela ngo-2002, sathola idumela ngekhwalithi enhle, siyaqiniseka ukuthi ama-nanopowders ethu azohlangabezana nezidingo zakho!
Kuthiwani ngesikhathi sokuveza nokuthumela?
Isevisi ye-Courier efana ne: DHL, Fedex, TNT, EMS.
Isikhathi sokuthumela (bhekisa kuFedex)
Izinsuku zebhizinisi eziyi-3-4 ziya emazweni aseNyakatho Melika
Izinsuku zebhizinisi eziyi-3-4 ukuya emazweni ase-Asia
Izinsuku zebhizinisi eziyi-3-4 ukuya emazweni ase-Oceania
Izinsuku zebhizinisi eziyi-3-5 ziya emazweni aseYurophu
4-5 izinsuku zebhizinisi emazweni aseNingizimu Melika
4-5 izinsuku zebhizinisi emazweni ase-Afrika